Qualcomm Snapdragon 8150 သည် 360K အတားအဆီးကိုကျော်လွန်ပြီး | Androidsis
၏မကြာသေးမီကပစ်လွှတ်ပြီးနောက် Huawei Kirin 980နှင့်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု အသစ် Mate 20လာမည့် Qualcomm chipset နှင့်ပတ်သက်ပြီးများစွာသောခန့်မှန်းချက်များအရဒီတစ်ခုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည် Samsung ၏ Exynos 9820 နှင့် Apple ၏ A12 Bionic တို့ဖြစ်သည်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Snapdragon 8150 (Snapdragon 855) ကိုတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမပြုမီ၊ ပရိုဆက်ဆာအခြေခံစံနှုန်းကို AnTuTu ကနေတစ်ဆင့် online ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ chipset သည်ကျော်ကြားသောအခြေခံစံနှုန်းတွင်ရမှတ် ၃၆၂,၂၉၂ ရရှိခဲ့သည်၃၆၀,၀၀၀ အမှတ်အသားကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့် Android platform ပေါ်တွင်ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုနိုင်သော SoC ဖြစ်သည်။ Apple ရဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ interface ကိုအတွက်ပေမယ့်။
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Kirin 20 chipset ပေါ်တွင်အသုံးပြုထားသော Huawei Mate 980 စီးရီးထုတ်ကုန်များသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမှတ် ၃၁၁,၈၄၀ ရရှိပြီးစမတ်ဖုန်းတွင်မူ Xiaomi က Black ငါးမန်း Helo ၎င်းသည် Qualcomm Snapdragon 845 နည်းပညာအသုံးပြုထားသောပစ္စည်းအတွက်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ဖြစ်ပြီး ၃၀၁,၇၅၇ မှတ်ဖြစ်သည်။ (ရှာတွေ့သည်: ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု၊ AnTuTu Benchmark အရ).
ရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကပုံပေါ်ပါတယ် Snapdragon 8150 သည် Huawei ၏ Kirin 16 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်သည် Snapdragon 20 သည် Snapdragon 845 ထက်စွမ်းဆောင်ရည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုကောင်းသည်။ Snapdragon 8150 ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်ထုတ်လုပ်သူများပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်အချိန်ကုန်လာနိုင်သည်။
Qualcomm Snapdragon 8150 သည် Kirin 980 နှင့် Samsung Exynos 9820 တို့နှင့်ဆင်တူသည့် triple cluster CPU core ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလာမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ၎င်းတွင် ၂.၈၄ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် core၊ ၃.၄ GHz အမြန်နှုန်းရှိသည့်အလတ်စား core သုံးခုနှင့် ၁.၇၈ GHz နှုန်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည့် core လေးခုပါရှိသည်။ Andreno 640 GPU ကိုထုပ်ပိုးမယ်, Adreno 20 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 630% ပိုကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကမ်းလှမ်းရန်ဟုဆိုသည်။
ထို့အပြင် chipset ကို TSMC မှအသစ် 7nm ဖြစ်စဉ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးအရွယ်အစားမှာ 12,4 x 12,4mm ဖြစ်သည်။ လာမည့်လတွင်ကြေညာမည်ဖြစ်သော်လည်း Snapdragon 8150 ကိုသယ်ဆောင်မည့်ကိရိယာများသည်မျှော်လင့်ရသည် 2019 ၏ပထမတစ်ဝက်ကနေရရှိနိုင်ပါသည်. Meizu သည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းတစ်လုံးတွင်ပထမဆုံးတပ်ဆင်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Qualcomm ၏ Snapdragon 8150 သည် 360K ရမှတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီး AnTuTu တွင်ရှိသည်